Accueil > Newsletters > Filazam-baovao faha-87
« Newsletter n° 87 [ENG]
Newsletter n° 88 »
publié par Admin, le mercredi 10 janvier 2018
Faly miarahaba anao tratry ny taona vaovao izahay ary mirary ny soa sy ny fahombiazana hanenika ny taona 2018 manontolo.
Hampisandratra ny rariny sy ny hitsiny anie ary hampitombo ny fanajàna ny zo fototry ny Malagasy eo amin’ny maha-olona ary indrindra eo amin’ny tany ivelomany ny taona 2018.
Faly koa mizara aminao ny fanambaràn’ny mpanatrika ny fivoriana nokarakarain’ny Fikambanana TANY teto Parisy tamin’ny fandalovan’i Clovis RAZAFIMALALA taty Eoropa, raha nasain’ny AMNESTY INTERNATIONAL niaraka tamin’ny olona sivy hafa mpiaro ny tontolo iainana avy amin’ny kontinanta samihafa izy.
Ao amin’ny faran’ny Fanambaràna dia mangataka ny mpamaky rehetra izahay mba hanasonia ny fitakiana an-tsoratra izay napetraky ny AMNESTY INTERNATIONAL hatramin’ny faha-22 Janoary 2018.
Misaotra indrindra amin’ny fanohananao sy ny fanaparitahanao ity fanambaràna ity.
Ny Fikambanana TANY miaro ny tany malagasy
Fihaonana tamin’i Clovis RAZAFIMALALA sy Fanambaràna
Ny alahady faha-17 desambra 2017, dia nanasa mpitolona sy namana akaiky hiara-handray an’i Clovis RAZAFIMALALA tao Parisy sy hiara-hihaino ny famelabelarana nataony mikasika « ny toerana misy sy ny fiarovana ny mpiaro ny tontolo iainana ao Madagasikara » ny Fikambanana TANY miaro ny tany malagasy – izay ny antom-pijoroany dia ny « handray anjara amin’ny fiarovana ny tany sy ny harena voajanahary malagasy sy hanohana ny olompirenena sy ny tantsaha ao Madagasikara amin’ny fivoarany sy ny tolona ataony hiarovana ny taniny sy ny harena voajanahary ».
Nanohina anay ny kalitaon’ny asa nataon’i Clovis sy ireo mpiara-miasa aminy ao amin’ny fikambanana LAMPOGNO sy ny COALITION NATIONALE DE PLAIDOYER ENVIRONNEMENTAL ;
Nomarihinay sy nankasitrahanay ny paikady samihafa nampiasain’ireo mpiaro ny tontolo iainana ao Madagasikara mba ahatakarana sy ampahalalàna ny fomba fiasa nampiasan’ireo mpandranto tsy ara-dàlana sy mpanondrana antsokosoko andramena (bois de rose) sy harena voajanahary sarobidy hafa any an-tanindrazana ;
Nanafitohina anay ny nandre ny fampitahorana, fandrahonana, fanagadràna tsy mitombona ary fisamborana vonjimaika mandra-piandry ny fitsaràna azy nihatra tamin’ireo mpiaro ny tontolo iainana. Ny fikasàn’izy ireo anefa dia ny hanome tànana ny manam-pahefana sy tompon-andraikitra mba hisian’ny fanajàna ny lalàna sy ny fiarovana ny tontolo iainana ary ny harena voajanahary mba ho samy hahazo tombotsoa amin’izany ny taranaky ny fianakaviana malagasy rehetra tsy ankanavaka.
Toy ny olompirenena eoropeana rehetra nifanena taminy nandritry ny fandalovany taty Eoropa, ary toy ny fikambanana sy rafitra rehetra novangiany teto Frantsa, dia manohana mafy an’i Clovis RAZAFIMALALA sy ireo mpiara miasa aminy izahay ao amin’ny fahavononany hentitra hanohy ny fiarovana ny harena voajanahary eran’ny Nosy sy ny tontolo iainana izay miantraika amin’ny mponina eran-tany ny vokany.
Manoloana ny herimpony sy ny fahavononany ara-drariny maha-te-hidera, dia mangataka amin’ireo manam-pahefana sy tompon’andraikitra malagasy izahay mba hanafoana ny sazy figadràna dimy taona sazy mihantona sy ny lamandy nomen’ny mpitsara an’i Clovis RAZAFIMALALA. Izany no angatahana dia ny mba ahafahany manohy amin’ny fomba mamokatra hatrany sy an-kahalalahana ny asa maha-mpandrindra ny Coalition Nationale de Plaidoyer Environnemental azy ao amin’ny faritra misy azy mha hanatsarana ny fiarovana ny Tontolo Iainana ao Madagasikara.
Parisy faha-17 desambra 2017
Hoy ireo rehetra nanatrika ny fivoriana nokarakarain’ny Fikambanana TANY
Ny olona rehetra izay maniry haneho ny fanohanany io fangatahana mitodika amin’ny manam-pahefana malagasy io mba hanafoanana ny fanasaziana azon’i Clovis RAZAFIMALALA, dia asaina hanasonia ny fitakiana an-tsoratra eto ambany izay napetraky ny AMNESTY INTERNATIONAL, alohan’ny 22 janoary 2018 :